Mayelana NATHI - Xinneng Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Isungulwe eminyakeni engaphezu kwengu-10 eyedlule i-Esineng ikhiqiza iphaneli elanga elingabizi kakhulu elinegama elaziwayo futhi elihlinzekwa kuwo wonke umhlaba.
Le nkampani ingumkhiqizi omncane nophakathi oqeqeshiwe wamaphaneli elanga we-photovoltaic. Kudala likhipha ibhizinisi ngezinkampani zangaphandle zokuhweba. Manje inkampani ithatha isinqumo sokuqhuba ibhizinisi lokuhweba langaphandle ngokuzimela. Abanikazi babone ukuvulwa emakethe kwemishini ephezulu yokusebenzisa amandla ukuthi ihlanganiswe nelanga ukunciphisa kakhulu izindleko zokugijima zamakhasimende futhi ibambe iqhaza elibhekele ukwehlisa ukufudumala komhlaba okungahle kube khona.
Ngokujoyina amabutho nenkampani yabo efrijini baqala ukuklama amasistimu elanga / amafriji asebenzisa u-100% wamandla elanga ekuhlelweni okuhlukahlukene kwezinhlelo.Ngaphezu kwalokho, ukuze kudlalwe ngokugcwele ezinzuzweni zamandla amasha, inkampani igxile emkhakheni wefriji , futhi ulwele ukudala uchungechunge lokonga amandla, imikhiqizo efrijini enobungani. Lokhu kusethe ukuphakama okusha kubuchwepheshe bezinketho zamandla avuselelekayo.
Futhi sinohlelo lokuqapha igumbi elibandayo, elingabheka isimo sesikhathi sangempela segumbi elibandayo kuselula, kufaka phakathi izinga lokushisa, inani lezimpahla, noma ngabe umnyango uvaliwe, njll., Futhi ifakwe i-alamu ukuthola izinkinga kwisitoreji esibandayo ngokushesha okukhulu ukunciphisa ukulahleka.
Ngesikhathi esifanayo sokukhiqiza nokuthengisa, inkampani inaka ubuchwepheshe obusha, ihlinzeka abasebenzisi ngesisombululo esiphelele sohlelo lwefriji yelanga, futhi inikeze amakhasimende uhlelo olusebenzayo lokuphatha oluhlakaniphile, oluphathekayo, oluphephile nolunokwethenjelwa. Ubuqotho, ukusizakala ngokuhlanganyela kanye nokwenziwa kwezinto ezintsha okuqhubekayo kuyizindinganiso eziyinhloko zenkampani yethu.
Inkampani yethu ibhizinisi elincane nelisemaphakathi eligxile ekukhiqizeni ama-solar photovoltaic panels.
Njengamanje, sinikezela ngezixazululo zefriji zamakamelo abandayo amancane naphakathi nendawo. Sine-grid ne-off-grid izinhlelo zelanga esingakhetha kuzo, futhi sinikeze izixazululo zamandla elanga ezahlukahlukene ngokusho kwezifunda ezahlukahlukene namazwe ahlukahlukene. Isistimu yefriji yelanga ilungele kakhulu izindawo ezingenawo ugesi noma ugesi obizayo. Iyunithi egcwele ifriji ye-DC inverter ingonga amandla angama-30% -50% kunamayunithi ejwayelekile efriji efrikhwensi ejwayelekile.Ngaphansi kweminyaka emithathu, izikweletu ezigciniwe zingathenga omunye umshini ofanayo.
Yize le nkampani yasungulwa kungekudala, yaziwa iningi labasebenzisi abakule mboni efanayo. Le nkampani ilandela umgomo wokuthatha isikweletu njengesisekelo, ukuba ngumuntu oqotho, nokufeza izinto ngokuziphatha. Ilawula ubuhle bezinto zokusetshenziswa zefriji eMpumalanga yeChina futhi inikezela ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme nesiqinisekiso samanani amabhizinisi asekhaya nakwamanye amazwe esifundeni iYangtze River Delta.
Kuyo yonke le nkampani, inkampani yethu enemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nensizakalo ecabangayo, izuze udumo lwabasebenzisi abaningi. Kuyo yonke le nkampani, inkampani yethu ithobela umthetho wokwethembeka, idumela kuqala nekhwalithi kuqala, futhi ikhonza amakhasimende amasha namadala ngenhliziyo yonke.
Sithemba ukukhuthazana, ukuthuthukisa ndawonye futhi sakhe ikusasa elingcono ngokubambisana ngobuqotho nobungane.